Nexus 6P, 5X na Pixel C enweelarị gam akporo 7.1 Dev Preview | Gam akporosis
Android 7.1 apụtawo na Google Pixel nwere ọtụtụ atụmatụ anyị enyochaworị n'oge ahụ izu abụọ gara aga ya na Nnukwu ekwentị Gma otu izu gara aga mgbe e gosipụtara ya. Ọ bụ na akụkọ ikpeazụ ahụ ebe ekwuru mgbe ọ ga-erute ihe dịka ọnwa a.
Taa ndị Gam akporo 7.1 onye nrụpụta preview maka Nexus 6P, 5X na Pixel C. Enwere ike ịnweta nlele ihu na ihu peeji nke Mmemme Beta maka ibudata ma nwalee. Versiondị 7.1 nke ekwesịrị ịdị na ọnwa nke ọnwa Disemba.
Gam akporo 7.1 gunyere otutu ihe ohuru, obu ezie na onu ogugu nwere otutu ihe metutara ya na Pixel, na aka ozo (obuna Nexus nwere ha, obu ezie na ndi pere mpe). Ihe ngosi ihe omuma nke gam akporo 7.1 Nougat biara launcher czọ mkpirisi, akara ngosi gburugburu na keyboard ihe oyiyi nkwado na ohere ohere ohere na mobile ngwaọrụ.
Ma, ndị kasị akpali bụ API gbanwere nke ahụ ga - enyere ndị mmepe aka imelite ngwa ha iji tinye ụfọdụ akụkụ dị egwu nke gam akporo Nougat. Nova Launcher na usoro ngwa ngwa ọzọ ga-abụ ndị na-ewetara anyị mgbanwe ndị a n'ụdị atụmatụ ọhụụ iji mee ka ngwa ha mara mma.
Nwere ike isonye na Ihe omume gam akporo Beta iji nweta onye nrụpụta ihe nlere ma ọ bụ were sistemụ sistemụ site na njikọ a iji gbanye ha aka. Okwesiri icheta na, ịnọ n'okpuru nyocha onye nrụpụta, ọ nwere ike ime nwee chinchi na enweghi oru, yabụ na ị karịrịrịrị ịdọ aka na ntị.
Google kwuru na ọ ga-ịgbatị kwado ngwaọrụ ọzọ maka ọnwa nke Nọvemba. Maka nsụgharị ikpeazụ ị ga-echere maka ọnwa Disemba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Android 7.1 Dev Preview dị ugbu a maka Nexus 6P, 5X na Pixel C
[APK] Nwelite ohuru na Google Keep nke ị nwere ike tụnye ihe edeturu ma jiri ụzọ mkpirisi
Apple ga - anọ na nzukọ World Mobile nke ọzọ na - esote 2017